Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) - Hello Sayarwon
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး))
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး))
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Centrum Kids ဟာသံဓါတ်နဲ့ ဗီတာမင်အစုံပါဝင်တဲ့ အားဆေးဖြစ်ပြီးအာဟာရပြည့်ဝစွာ မစားသုံးနိုင်ခြင်း၊ အချို့သောရောဂါတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကိုကာကွယ်ကုသရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
ဗီတာမင်နဲ့ သံဓါတ်တို့ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ရောကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အဓိကကျတဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Centrum Kids ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျေညက်အောင် ဝါးစားပါ။ ဆေးညွှန်းပေါ်မှာဖော်ပြထားသည်များကိုတိတိကျကျ လိုက်နာပါ။ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးပမာဏထက် ပိုပြီးမသောက်သုံးသင့်ပါ။ မရှင်းလင်းသည်များကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အားမေးမြန်းပါ။
Centrum Kids ကိုအစာမစားမီ ၁နာရီကြိုတင်၍ဖြစ်စေ၊ အစာစားပြီး ၂နာရီအကြာမှာ ဖြစ်စေသောက်သုံးပါ။ အကယ်၍ အစာအိမ်ဝေဒနာဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ အစာနဲ့တွဲပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာအစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ်ပြယ်ဆေး၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီတို့ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုလျော့ကျစေတဲ့အတွက် ၎င်းတို့နဲ့အနည်းဆုံး ၂နာရီခြားပြီး သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဆေးအာနိသင် အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ဖို့ ဆေးသောက်ချိန်ကိုတိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားပြီး အချိန်မှန်မှန်သောက်သုံးပါ။
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Centrum Kidsကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Centrum Kidsကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Centrum Kids ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Centrum Kidsကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Centrum Kidsသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
သံဓါတ်လွန်ကဲသည့်ရောဂါ တစ်ခုခုခံစားနေရခြင်း (ဥပမာ hemochromatosis, hemosiderosis)
ဗီတာမင် ဘီ၁၂ ချို့တဲ့သည့်ရောဂါ (pernicious anemia) ခံစားနေရခြင်း – Centrum Kids မှာ ပါဝင်တဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာဗီတာမင် ဘီ၁၂ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု အဖြေတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကဗီတာမင် ဘီ၁၂ ချို့တဲ့မှု ရှိနေလျက်နဲ့ မပေါ်လွင်တာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုအမှန်လို့ယူဆပြီးမကုသဘဲထားရင် ပြင်းထန်တဲ့ အာရုံကြောပြဿနာတွေ (ဥပမာခြေလက်များအာရုံကြောအားနည်းခြင်း) ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Phenylketonuria (PKU) အပါအဝင် aspartame (သို့မဟုတ် phenylalanine) စားသုံးမှုကိုလျော့ချဖို့လိုအပ်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေခဲ့ရင် Centrum Kids မသောက်သုံးခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Centrum Kids သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုခဏတာယာယီသာခံစားရမှာဖြစ်ပြီးသင့်ခန္ဓါကိုယ်ကဆေးနဲ့အဆင်ပြေလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေ ပိုဆိုးလာမယ်၊ မပျောက်ဘဲအချိန်ကြာကြာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးသင့်ပါတယ်။
Centrum Kids မှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓါတ်ကြောင့် ဆေးသောက်သုံးနေတဲ့ ကာလတလျှောက် ဝမ်းအရောင်မည်းမည်းသွားတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။
Centrum Kids ကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်သလောက် နည်းပေမယ့် ဆေးသောက်သုံးပြီး အဖုအပိမ့် အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းစတာတွေ ယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူသင့်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Centrum Kidsဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Centrum Kids နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အခြားဆေးဝါးစုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးများ – ဥပမာ bisphosphonates (alendronate), levodopa, penicillamine, quinolone အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများ (ciprofloxacin, levofloxacin), သိုင်းရွိုက်ရောဂါများအတွက် သောက်သုံးရတဲ့ ဆေးဝါးများ (levothyroxine), tetracycline အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများ (doxycycline, minocycline)
အတက်ရောဂါသက်သာစေတဲ့ ဆေးဝါးများ (ဥပမာ phenytoin) သောက်သုံးနေရသူတွေဟာ ဖောလစ်အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စုံအားဆေးမသောက်သုံးခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Centrum Kidsက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Centrum Kids နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကတော့
အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ (ဥပမာအနာဖြစ်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသင့်ဆရာဝန်ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းပါ။
ကလေးတွေအတွက် Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Centrum Kids နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်သုံးမှသာဆေးရဲ့ အကောင်းဆုံးအကျိုးအာနိသင် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂နှစ်မှ ၃နှစ်ကြားကလေးငယ်များ – တစ်နေ့ တစ်ခြမ်းအစာနဲ့တွဲပြီးသောက်သုံးရန်
အသက် ၄နှစ်အထက် ကလေးများ – တစ်နေ့တစ်ပြားအစာနဲ့တွဲပြီးသောက်သုံးရန်
အသက် ၂နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေကိုCentrum Kids မတိုက်ကျွေးသင့်ပါဘူး။
Centrum Kids (စန်ထရမ်(ကလေး)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Centrum Kids ကိုဗီတာမင်အစုံနဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အလွယ်တကူဝါးစားနိုင်တဲ့ ဆေးပြားအသွင်နဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Centrum Kids ကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-147112/centrum-kids-oral/details#interactions. Accessed October 6, 2017
အစားစားချိန်မှန် ဖို့လိုအပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
လေနဲ့ ဝမ်းနဲ့ မကွဲရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ။ ။